Xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka oo diiday kala diristii Guddiga – Kalfadhi
Xoghayaha Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyadda ee Golaha Shacabka, Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa ka hor yimid go’aanka uu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Muudey, ku kala eryey Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyadda ee Golaha. War uu ku soo qoray Feysbuuggiisa ayuu Xildhibaan Cabdullaahi ku sheegay in warqadda ka soo baxday Guddoonka Golaha Shacabka ay sharci darro tahay.
War uu siiyey TV-ga Dalsan, waxa uu Xildhibaanku ku sheegay inuusan Guddoonku wada qabin ra’yiga lagu burburinayo Guddiga Maaliyadda. “Guddoonka oo dhan ma wada qabaan ee waa Guddoomiye Kuxigeenka Koowaad iyo Labaad” ayuu ku yiri wareysiga TV-gaas. Intaas waxa uu raaciyey iney wada hadleen isaga iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal, uuna u sheegay inuusan raali ka ahayn go’aanka lagu kala diray Guddiga.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu ku adkeysanayaa inuu Guddiga Maaliyaddu sii shaqeyn doono. “Guddigu sifa sharciya ayuu ku yimid, sifa sharciyana wuu ku sii shaqeyn doonaa” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi. Waxa uu sheegay in, marka la fiiriyo Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka, uusan Guddiga Maaliyaddu ku burbureyn sifada uu Guddoomiye Muuddey ku kala diray, sida uu hadalka u dhigay.
Arragtidaas waxaa la qaba Xubno kale oo Guddigaas ka tirsan, kuwaas oo barahooda bulshada ku faafiyey ineysan sharci ahayn kala eryidda Xubnaha Guddiga ay ka tirsan yihiin. Hase ahaatee, Guddigaas waxa uu u qeybsamay labo, kadib markii ay qaarkood sheegeen ineysan waxba ka ogeyn War-bixin Miisaaniyadeedka 2018-ka oo uu Guddigu soo saaray, Golahana la dhex keenay Sabtidii, taas oo ku eedeeneysay Wasaaradda Maaliyadda qalad uu maamulid Miisaaniyadeed.
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, oo qodobada uu u cuksanayey kala diridda Guddigaas ay qeyb ka ahayd kala qeybsanaantiisa, ayaa sheegey in go’aanka ay la og yihiin Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Kuxigeenka 2-aad ee Golaha. Marka laga soo tago beeninta Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ah inuusan go’aankaas Guddolmiye Maxamed Mursal wax ka ogeynna, ma jirto wax war/qoraal ah oo ka soo baxay 2-da Guddoomiye, oo warkiisa taageeraya ama ka hor imaanaya.